﻿ ​गर्मीका कारण वीपीमा बिरामीको चाप बढ्यो
महिला साफ च्याम्पियनसिपः नेपालद्वारा श्रीलंका ४–० ले पराजित
​आजदेखि होली सुरु, यस्तो छ महिमा (भिडियोसहित)
सावधान, यी भारतीय औषधीहरु गुणस्तरहीन (सुचीसहित)
​प्रितमलाई सहयोग गर्न लागिपरे इटहरीवासी (भिडियोसहित)
​गर्मीका कारण वीपीमा बिरामीको चाप बढ्यो
मङ्गलबार २९, जेठ २०७५
धरान । पुर्वमा अत्याधिक गर्मी बढेको कारण बच्चा तथा वृद्धावृद्धा अनेक रोगहरुको संक्रमणबाट बिरामी हुन थालेका छन् । गर्मीका कारण सुनसरीको धरानस्थित वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ।।मा उपचारका लागि आउने बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ ।
अत्याधिक गर्मीका कारण छाला सम्बन्धी विभिन्न समस्या आएपछि वीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको छाला तथा यौन रोग विभागमा उपचार गराउनेको भीड थामि नसक्नु रहेको छ । छालाको रोगसंगै गर्मीका कारण बच्चाहरुलाई ज्वरो, बमिट तथा झाडा पखालाले सताउने गरेको छ भने वृद्धवृद्धाहरुलाई खुट्टाको घुडा दुख्ने तथा श्वास प्रश्वासको समस्या बढेको छ ।
सम्पूर्ण विरामीको ५० प्रतिशत भन्दा बढी विरामीहरु बालबच्चा र वृद्धवृद्धा रहेका छन् । अन्य समयमा दैनिक १५ सय सम्म बिरामी आउने गरेको प्रतिष्ठानमा अहिले ३ हजार सम्म बिरामीहरु आउने गरेको प्रतिष्ठानका बिल काण्टरका कर्मचारी धमेन्द्र राजवंशी बताउँछन् । उनका अनुसार बालबालिका, वृद्धवृद्धा र छालाको रोग लिएर बिरामी आउने गरेका छन् ।
गर्मीमा मिसावटी खानपिन र घामको तापले गर्दा बिरामीहरुको चाप बढ्न थालेको छ । गर्मीका दुषित पानी, अनावश्यक चिसो पेयपदार्थ, बजारका सडकमा राखिएका जथाभावि खानेकुराले बढी समस्या बनाएको चिकित्सकहरुको भनाई छ । गर्मीका समयमा बृद्धाबृद्धा र बच्चा बच्चाको स्वाथ्यमा बढी ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकहरुको सुझाव छ । गर्मीको समयमा पानीलाई शुद्ध बनाएर पिउने र बासी खानेकुराहरु खान नहुने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
गर्मीकै कारण अहिले प्रतिष्ठानमा दैनिक ५ हजार विरामीहरु उपचारका लागि आउने गरेका छन् । अत्याधिक भीडका कारण उपचारमा समेत कठिनाई हुने गरेको छ । गर्मीका समयमा अन्य समय भन्दा बढी सावधान अपनाउन सर्वसाधारणलाई अपिल समेत गरेका छन् ।
महोत्तरीमा ट्याक्टर र मोटरसाइकल ठोक्किदा एकजनाको मृत्यु
​मोदी लण्डनबाट पक्राउ !
​नख्खुमा बम विष्फोट गराउने चार जना विप्लवका कार्यकर्ता पक्राउ
निर्मला हत्या प्रकरणः एसपी विष्ट आज पनि थुनामा
महिला साफ च्याम्पियनसिपः भारतद्वारा बंगलादेश ४–० ले पराजित
​मुख्यमन्त्री राईले दिए होलीको शुभकामना